'जी न्युज'ले गलत गर्‍यो, सबै भारतीय... :: शोभा शर्मा :: Setopati
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार २६
नेपाली केबलहरूले भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण बन्द गरेपछि त्यो निर्णय कति ठीक वा बेठीक थियो भनेर बहस भएको छ।
'जी न्युज'ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतसँग जोडेर भ्रमपूर्ण र अशिष्ट सामग्री बनाएर सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यसले नेपालमा व्यापक रोष र विरोध उत्पन्न गर्‍यो। त्यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार च्यानलबारे चर्को विरोध भएपछि बिहीबार नेपालका केबल अपरेटरहरूले भारतीय समाचार च्यानलहरू नै बन्द गरिदिए। धेरैले केबल अपरेटरहरूलाई धन्यवाद दिए, सामजिक सञ्जालमा पनि त्यो निर्णयको स्वागत भयो।
कतिपयले भने केबल अपरेटरले मनलाग्दी च्यानल बन्द गर्न नपाउने तर्क गरेका छन्।
त्यस्तै, एउटा वा दुइटा भारतीय टिभी च्यानलले अमर्यादित सामग्री प्रसारण गर्ने बित्तिकै सबै भारतीय समाचार च्यानल बन्द गरेर हामी अनावश्यक रूपले तरंगित भएको कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले यसरी एकमुस्ट भारतीय च्यानल किन बन्द गरेको? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्- भारतको प्रेस काउन्सिल कहाँ छ? किन भारतीय च्यानललाई एकमुस्ट बन्द गरिएको? नेपालीहरू प्रसारण भइरहेका सामग्री अश्लील र खतरनाक छन्/ छैनन् भनेर परिपक्व मूल्यांकन गर्न सक्ने छन्। त्यसैले रोक्का फुकुवा गर्नुहोस्।
डिस होमका कार्यकारी निर्देशक सुवास आचार्यले भने ग्राहकको दबावका कारण आफूहरूले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्नुपरेको बताए।
डिस होमले जी न्युज, एबिपी र आजतक च्यानल नेपालमा बन्द गरेको उनले जानकारी दिए।
'हामीलाई केही समय अघिदेखि नै व्यापक दबाव थियो। नेपालको बारेमा भारतीय मिडियाले निरन्तर भ्रामक समाचारहरू बजाउन थालेपछि ग्राहकले त्यस्ता च्यानल नेपालमा किन बज्न दिएको भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो,' उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तत्व नै भन्न भ्याएका थिए। तर जी न्युजको पछिल्लो सामग्रीपछि हामीले दबाव थेग्नै सकेनौं र बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यौं।'
बिहीबार ती च्यानल बन्द गर्नुअघि आफूले सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई अनौपचारिक रूपमा सोधेको पनि उनले जानकारी दिए।
'उहाँले पनि हुन्छ तपाईं आफ्नो हिसाबले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो अनि हामीले बन्द गरेका हौं,' उनले भने, 'च्यानल र ग्राहकसँगको सम्झौताबाहेक हामीले बन्द गर्न पाउने नपाउने स्पष्ट नियम कानुन छैन। ग्राहककै दबावका कारण हामीले बन्द गरेका हौं।'
उनले कुनै च्यानल आफ्नो सेवाबाट हटाउने वा राख्ने भन्ने अधिकार आफूहरूसँग भएको बताए।
'तपाईंहरूले कुनै समाचार गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ नि होइन?', उनले प्रश्न सोधे, 'हामीले पनि कुनै च्यानल हाम्रो केबलबाट प्रसारण हुन दिन्नौं भन्न सक्छौं।'
अन्य च्यानल वितरक कम्पनीहरूले भने भारतका सबै समाचार च्यानलको प्रसारण हिजो साँझदेखि बन्द गरेका छन्।
चीनसँग जोडेर नेपालका बारेमा अतिरञ्जित सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै कम्पनीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा त्यस्ता च्यानलको प्रसारण बन्द गर्ने निर्णय गरेको म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले जानकारी दिए।
'हामी अपरेटरहरूले सल्लाह गरेर हाम्रो राष्ट्रियतामा धावा बोल्ने भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण बन्द गरेका हौं' शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीलाई सरकार वा कुनै निकायले निर्देशन वा दबाव दिएको होइन।'
आचार्यले पनि अपरेटरहरूले सल्लाह गरेर नभई एकैचोटि बन्द गर्ने निर्णय संयोगमात्र भएको बताए।
म्याक्सले भने करिब २० वटा भारतीय च्यानलको प्रसारण रोकेको शर्माले जानकारी दिए।
उनीहरूले एकाएक भारतीय च्यानल बन्द गरेपछि सरकारले यसबारे के भन्छ भन्ने धेरैको चासो थियो।
शुक्रबार दिउँसो केबल अपरेटरहरूले सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेका थिए।
नेपाल तथा प्रधानमन्त्री ओलीबारे जथाभावी सामग्री प्रसारण गर्ने भारतीय मिडियाको प्रसारण रोकेकोमा अपरेटरहरूलाई सञ्चारमन्त्रीले धन्यवाद दिएको एक टिभी अपरेटरले जानकारी दिए।
शुक्रबार साँझ विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारले टिभी च्यानलहरूलाई धन्यवाद दियो।
त्यस्तै, भारतीय टिभी च्यानलले नेपाल र नेपालीविरूद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले विरोध जनाएको छ।
भारतका केही सञ्चार माध्यमबाट अपुष्ट, अक्षम्य र भ्रामक सामग्री प्रसारण भएकोप्रति काउन्सिलले समकक्षी 'प्रेस काउन्सिल अफ इन्डिया' समक्ष गम्भीर सरोकार राखेको कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जी टिभीले प्रसारण गरेको सामग्रीले सामान्य शिष्टताको सीमा नाघेकोमा कुनै शंका छैन। तर त्यसैलाई आधार बनाएर सबै भारतीय समाचार च्यानल प्रसारण रोक्नु गर्नु कतिको जायज हो?
मानौं, भोलि कुनै एउटा नेपाली अनलाइनले भारत वा अरु कुनै मुलुकका बारेमा अशिष्ट सामग्री छाप्यो।
त्यसैको सनकमा भारतले सबै नेपाली अनलाइन त्यहाँ पढ्न नमिल्ने बनाउनु कति जायज हुन्छ?
खुला समाजमा मिडियामा आएका समाचर वा मिडियाकर्मीले बोलेका, लेखेका कुराहरूको पनि समीक्षा र आलोचना हुन्छ। त्यसले मिडियाहरूलाई विश्वसनीयता बन्न दबाव दिन्छ।
कैंयन् भारतीय टिभीहरूको विश्वसनीयतालाई लिएर भारतमै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
भारतमा सरकारको चरम भक्तिगान गर्ने र विपक्षीहरूको मानमर्दन गर्ने मिडियाहरूलाई 'गोदी मिडया' भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ।
खुला समाजमा हुने आलोचनाले मिडियाकर्मीलाई पनि दबाव दिन्छ।
जी टिभीकै प्रधान सम्पादकले मेटाएको ट्विटको घटनालाई हेरौं।
नेपालमा जी टिभी लगायत च्यानलहरू बन्द भएपछि सो टिभीका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले एउटा ट्वीट गरे।
सो ट्वीटमा उनले नेपालीहरू भारतीय समाचारवाचकहरूसँगै डराएकाले सेनाको जरूरी नै नपरेको लेखेका थिए। त्यसको नेपालमा त तिखो आलोचना भयो नै भारतमै पनि उनको ट्वीट आलोचित भयो।
उनले आफ्नो ट्वीट मेट्दै त्यसमा आफूबाट गल्ती भएको भनेर अर्को ट्वीट लेखे।
उनले लेखेका छन्, 'मेरो यो ट्वीटले नेपालमा रहेका हाम्रा दर्शक आहत भएका छन्। यहाँ भारतमै पनि धेरैजसो मान्छेहरूले यो विचार ठीक नभएको भनेर लेखेका छन्। हुन सक्छ कि मैले समाचारहरू आएपछि आवेशमा आएर प्रतिक्रिया दिएँ हुँला। यो मञ्च अभिव्यक्तिको लागि हो, आहत हुन होइन। त्यसैले खेद जनाउँदै मैले यो ट्वीट हटाएको छु,' उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्।
'जी न्युज' ले प्रधानमन्त्री ओलीबारे प्रसारित गरेको सामग्रीले शिष्टताको सीमा नाघेकोमा सायद भारतमै पनि धेरैको बिमति थिएन। त्यसैले नेपालले त्यो च्यानलमाथि मात्र कारबाही गरेको भए भारतमा पनि धेरैले त्यसलाई नाजायज मान्ने थिएनन्।
नेपाल तथा भारतभित्रै भएको आलोचनाका कारण पनि जी न्युजले शुक्रबार नै नेपालका प्रधानमन्त्रीबारे त्रुटीवस् कार्यक्रम प्रसारित भएको र त्यसले नेपाली जनताको भावनामा ठेस पुगेकोमा हामी दु:ख व्यक्त गर्दछौं भनेर टिभीमै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २७, २०७७, १५:००:००